Tsy Ampy Hametrahan’ny Governora Fialàna Fotsiny Izay Fangatahan’ny Filoha Ao Afghanistan · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Febroary 2018 8:02 GMT
Eo ankavanana, Atta Mohammad Noor, governora teo aloha tao amin'ny faritanin'i Balkh, manome voninahitra ny sainam-pirenena Afghan ao amin'ny faritanin'i Balkh. Creative Commons. Sarin'ny Tafika An-habakabaka Amerikana, avy amin'ny serzà. Jeff Nevison
Satria manomboka ny andro faha-dimampolo amin'ny maha-governoran'ny faritr'i Balkh ao Afganistana azy i Mohammad Daud, dia mety manontany tena izy raha handray ny fanalahidy avy amin'ny olona hodimbiasany.
Nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny Filoha Ashraf Ghani fa nisolo an'i Ata Mohammad Noor tamin'ny 18 Desambra 2017 i Daud, saingy tsy nahatsapa izany ho fiovan'ny asa i Noor malaza.
Nandritra ny volana lasa, nanana governora 2 i Balkh (3 raha manisa ny governora miafin'ny Taliban) ianao. Ny iray nitantana ny faritany tahaka ny mpanjaka, ary tsy mety miala ankehitriny, miezaka ny hisongadina bebe kokoa amin'ny fihantsiana an'i Ghani. Tsy afaka mahazo izany ny mpandimby azy – vonona amin'ny akanjo 3 ambony ambany sy volombava nolokoina.
Ankoatra ny fandavàna ny hiala amin'ny toerana notazoniny nandritra ny 13 taona mahery, nandidy ny fisamborana an'i Daud noho ny fiampangana famonoana olona i Noor. Toa mirona bebe kokoa amin'ny fiarahamiasa amin'ny governora teo aloha fa tsy ny governora vaovao ny manampahefana ao Balkh, ka mahatonga an'i Daud – izay miasa ankehitriny avy ao Kabul – ho tsy afaka mandingana ho ao Balkh.
Adim-pahefana alohan'ny fifidianana
Nilaza i Noor fa ny fanapahan-kevitra handroaka azy dia “tsy misy fototra ara-dalàna” ary tondroiny ho hetsik'i Kabul ho fanomanana fifidianana amin'ny taona 2019l. Niresaka tamin'ny Reuters, hoy izy:
Momba ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2019 izany. Tsy manana fanohanana eny ifotony eo anivon'ny vahoaka ireo [Mpiara-dia amin'i Ghani] ary matahotra an'ireo olo-malaza manana mpanohana.
Nilaza ihany koa izy fa nanolotra ny fametraham-pialany tany amin'i Ghani volana vitsy lasa izay, saingy tamin'ny fepetra maromaro – ny fanendrena ireo mpiara-dia lehibe amin'ny toerana ambony indrindra ao amin'ny governemanta – izay tsy tontosa akory.
Ao anatin'ny olana no misy ny fifandrafiana eo amin'ireo mpitarika ny foko roa izay manjaka amin'ny politika Afghana: Pashtuns sy Tajiks.
Mpitarika ambony ao amin'ny Antoko Jamiat-anjakan'i Tajik i Noor, izay resin'i Ghani, foko Pashtun tamin'ny fifidianana filoham-pirenena henjana tamin'ny taona 2014 ny kandidàny Abdullah Abdullah.
Hatramin'io fandresena io, toa niasa tamin'ny fanararaotana ny fizarazarana tao amin'ny Antoko Jamiat i Ghani sy ireo mpiara-dia aminy mba handravana ny antoko.
Noor, ohatra, dia tsy miresaka intsony amin'i Abdullah, kandidà voatendry teo aloha tao amin'ny antoko, izay nanaiky ny loka fampiononana avy amin'ny ny lehibe mpanatanteraka, rehefa nanohitra ny voka-pifidianana 2014 tany am-boalohany.
Foko Tajik ihany koa i Daoud, governora nanao fianianana tao Balkh, ary mpikambana ao amin'ny Jamiat, saingy anisan'ny nahazo ny toerany vaovao ao amin'i Ghani, fa tsy ao amin'ny antoko.
Nanohitra tamin'ny fomba ofisialy ny fandroahana an'i Noor ny antoko Jamiat ary niampanga an'i Ghani ho manangom-pahefana. Nilaza ihany koa izy ireo fa te hanakorontana ny faritr'i Balkh ny manampahefana, faritra izay milamina ara-politika indrindra fahiny tao Afganistana, ary mandroso ho ivon'ny toekarena avaratra nandritra ny fotoana niandraiketan'i Noor.
Na dia izany aza, nanakorontana ny fomba fijeriny momba io olana io ny fisian'ny mpikambana Jamiat maro ao amin'ny governemanta ary nanamaivana azy amin'ny maha mpanohitra manankery.
50% n'ny governemanta ankehitriny ny Jamiat, izay midika fa tompon'andraikitra 50% amin'ny zavatra rehetra ihany koa izy ireo. Raha mitsikera ny governemanta izy ireo, dia manakiana ny fahefan'izy ireo ihany koa … Raiso ity torolàlana tsotra ity! Aza mandrora eny amin'ny rivotra …
Ny tombontsoan'ny antoko ankoatra ny Jamiat dia tokony tsy hiraharaha ny foibem-pahefana, raha mitsinjo lavitra izy ireo, dia tokony hikatsaka ny famondronam-pahefana, raha voafidy ho filoha ny mpikambana Jamiat rahampitso, hiverina ihany ny zava-misy saingy ao amin'ny faritra hafa ao Afghanistan.
Mampiseho ireo fangatahan'ny Jamiat-I-Islami fa tsy hahomby ny resaka ary tsy manan-tsafidy afa-tsy ny manala an'i Atta Noor amin'ny fampiasan-kery ny filoha
Heverina fa hanaiky ny fametraham-pialan'i Noor ny Jamiat raha afaka nanendry ny mpandimby azy ny antoko tenany, fa tsy i Ghani. Maniry hanavao ny lalampanorenan'i Afghanistan, amin'ny alalan'ny fitazonana ny fila-kevi-dehibe nentin-drazana (Loya Jirga) ihany koa ny antoko.
Mbola iandrasam-bokany ny fifampiresahana mivantana teo amin'ny biraon'ny Jamiat sy ny biraon'i Ghani.
Niditra i Washington
Miankina betsaka amin'ny fanampiana sivily sy miaramila Amerikana i Afganistana ka niditra an-tsehatra hamaha ny olana ara-politika maro tao anatiny i Washington.
Tamin'ny 16 Janoary, namaky ny resaka an-tariby teo amin'ny filoha lefitra Amerikana, Mike Pence sy Ghani, niresaka ny momba an'i Noor ny Trano Fotsy:
Niresaka momba ny fitarihana ara-politika ao amin'ny faritanin'i Balkh ny Filoha lefitra Pence sy ny Filoha Ghani. Nanantitrantitra ny fanohanany ny governemanta Afghana ny filoha lefitra mba hifampiraharaha amin'ny Governoran'i Balkh, Atta ary hitarika fifandimbiasam-pahefana ifampiraharahana am-pilaminana .
Nanamarika i Bashir Bezhen, mpanadihady momba ny fiarovana Afgàna fa ny fanondroan'i Pence an'i Noor ho governora ara-dalàna dia tsy ahafahan'i Kabul mihitsy hampiasa hery hanesorana azy.
Nisy ny tahotra talohan'ny antso an-tariby fa hampiasa hetsika miaramila ny governemanta mba hanesorana an'i Atta, ary hamaly amin-kery ny mpanohana azy… Ankehitriny, lasa izany tahotra izany.